IiNkcukacha zeSikolo zeJapan
Inkqubo Yemfundo YaseJapan
Inkqubo yemfundo yaseJapan yatshintshwa emva kweMfazwe Yehlabathi II. Inkqubo yokudala ye-6-5-3-3 yaguqulwa ibe yinkqubo ye-6-3-3-4 (iminyaka engama-6 yesikolo esiprayimari, iminyaka eyi-3 yesikolo esiphakamileyo samabanga aphezulu, iminyaka eyi-3 yesikolo esiphakamileyo samabanga kunye ne-4 yeYunivesithi) kwinkqubo yaseMerika . I-gimukyoiku 義務教育 (ixesha eliyimfuneko) leminyaka li-9, 6 kwi-shougakkou 小学校 (isikolo sokuqala) kunye ne-3 kwi-chuugakkou 中 学校 (isikolo esiphakamileyo samabanga aphezulu).
IJapan yenye yezona ndawo zifundiswe kakhulu kwilizwe, ngokubhalisa ngo-100% kumabakala anyanzelekileyo kunye nokungafundi . Nangona kungekho impoqo, isikolo esiphakamileyo (ukubhalisa koukou 高校) singaphezu kwe-96% kwilizwe lonke kwaye phantse i-100% kwizixeko. Isikolo esiphakamileyo sokuphuma kwesantya si-2% kwaye sanda. Phantse i-46% yabo bonke abaphumelele esikolweni esiphakeme baye kwiyunivesithi okanye kwiikholeji ezincinane.
ISebe leMfundo lijongene nekharityhulam, iincwadi zezifundo, kunye neeklasi kwaye zigcina izinga elifanayo lemfundo kulo lonke ilizwe. Ngenxa yoko, umgangatho ophezulu wemfundo unokwenzeka.
Uninzi lwezikolo zisebenza kwinkqubo yexesha eli-3 ngomnyaka omtsha ukususela ngo-Ephreli. Inkqubo yemfundo yanamhlanje yaqala ngo-1872 kwaye ilandelwa emva kwenkqubo yesikolo yaseFransi , eqala ngo-Ephreli. Unyaka-mali waseJapan uqala ngo-Epreli kwaye uphela ngo-Matshi wonyaka olandelayo, olungele ngakumbi kwiimeko ezininzi.
Ngo-Epreli kukuphakama kwentwasahlobo xa iintyatyambo ze-cherry (intyatyambo ethandwa kakhulu eJapan!) Ziyaqhakaza kunye nexesha elifanelekileyo kakhulu lokuqala kwiJapan. Lo mdahluko kwinkqubo yonyaka wesikolo ubangela ukuphazamiseka kwabafundi abanqwenela ukufunda ngaphandle kwamanye amazwe e-US Isiqingatha sonyaka sichithwa ukulinda ukungena kwaye ngokuphindaphindiweyo omnye umonakalo xa usubuyela kwinkqubo yeyunivesithi yaseJapan kwaye kufuneka uphinde unyaka .
Ngaphandle kwamabanga aphantsi esikolweni sasisiseko, usuku lokufunda lwesikolo kwimini yeeveki li-6 iiyure, okwenza kube nye yeentsuku zesikolo ezide kakhulu kwihlabathi. Nangona emva kokuba isikolo sikhuphe, abantwana baqhuba kunye neminye imisebenzi yasekhaya ukuze bahlale bexakekile. Iifama ziiveki ezingama-6 ehlobo kwaye malunga neeveki ezi-2 nganye zebusika kunye nekhefu lokusasa. Kukho rhoqo umsebenzi wesikolo kulezi zikhefu.
Yonke iklasi ineklasi yokufundela apho abafundi bayo bathatha zonke iikhosi, ngaphandle koqeqesho olusebenzayo kunye nomsebenzi webhubhoratri. Ngexesha lemfundo yokuqala, kwiimeko ezininzi, utitshala omnye ufundisa zonke izifundo kwiklasi nganye. Njengomphumo wokukhula ngokukhawuleza kwabemi emva kweMfazwe yehlabathi II, inani labafundi kwisikolo esiphezulu okanye esikolweni esiphakamileyo samabanga aphakamileyo sele lidlule abafundi abangama-50, kodwa ngoku lugcinwa ngaphantsi kwe-40. Kwiziko eliphakamileyo leziko eliphakamileyo, isikolo sasemini ( kyuushoku 给 食) unikezelwa kwimenyu ekwahlukileyo, kwaye idliwa eklasini. Phantse zonke izikolo eziphakamileyo ezisemgangathweni zifuna abafundi babo ukuba banxibe iifom yesikolo (seifuku 制服).
Umehluko omkhulu phakathi kwenkqubo yesikolo yaseJapan kunye nenkqubo yeSikolo saseMelika kukuba amaMerika ahlonipha abantu ngabanye ngelixa iJapan ilawula umntu ngokuqwalasela imithetho yeqela.
Oku kunceda ukucacisa uphawu lwaseJapan lokuziphatha kweqela.
Ngenxa yokukhula ngokukhawuleza kwabemi emva kweMfazwe Yehlabathi II, inani labafundi kwisikolo esiphakamileyo okanye esikolweni esiphakamileyo samandulo sele lidlulile kuma-50.
Dainiji sekai taisen no ato no kyuugekina jinkou zouka no tame, tenkeitekina shou-chuu gakkou no seitosu katsute go-up nin o koemashita.
第二 次 世界 大 戦 の あ と の 急 激 な 人口 増 加, 典型 的 な 小 中 学校 の 生 徒 数 は 50 人 を 超 え ま し た.
"~ akukho tame" kuthetha "ngenxa ye ~ ~".
Andizange ndihambe emsebenzini ngenxa yokubanda.
I-Kaze akukho tame, i-Shigoto ni ikimasen deshita.
風邪 の た め, 仕事 に 行 き ま せ ん で た た.
i-e-mail ye-第二 次 世界 大 戦 IMfazwe Yehlabathi II
ato あ と emva
kyuugekina 急 激 な ngokukhawuleza
jinkou zouka 人口 増 加 ukukhula koluntu
tenkeitekina 典型 的 な eziqhelekileyo
shou chuu gakkou 小 中 学校 kwizikolo eziphambili kunye nezikolo eziphakamileyo
seitosuu 生 徒 数 manani abafundi
katsute か つ て Kanye
go-up 五十 Amashumi amahlanu
koeru 超 え る kudlula
Isikhokelo esiya kwiJamani Toasts (okanye iTrinsprüche)
Ukuphila nokusebenza eFransi
Ukufunda isiTshayina ngeSkritter
Indlela Yokuthetha Ngentsapho Yakho ngesiTaliyane
Imvelaphi yeNgcaciso 'Honi Soit Qui Mal Yicinga'
Iimpawu ZaseTaliyane: Iproverbi Italiani
I-Snapshot yeJamani yaseRomantische Strasse
Uluhlu lwezona zinto zihamba phambili ze-80s Iingoma ezivela kwiBato Chicago
Umlando omnyama kunye nexesha labesetyhini 1970-1979
Umthandazo kuMongameli wethu weRosari
Slang kwiilwimi zesiNgesi
Ukuba ufuna i-Handicap Golf, Ufuna inani elithile leenqaku
Xa Ufanele Uhambise i-FAFSA?
Iingcebiso zokulwa nokuphumula kweGrade
I-Obsidian - I-Glass yeVolcanic eyamkelwa kwiCandelo loTywala
Yintoni i-Polar Shift?
Isatifiketi sokuKhathalela nokuKhula
Biography kunye neProfayili yeCris "Cyborg" Justino
Ngaba Ndingaba NgumKristu Wiccan okanye Ngumlumbi?
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiNgqungquthela yaseMpuma
I-Impostor Syndrome: Ngaba Ukhohlisa Wonke umntu?
Iiprotesti, Inkcazo, kunye nendlela iSilungiso sokuQala esiSebenza ngayo kwiikholeji
Isishwankathelo se-Odyssey Book I
I-Al Geiberger: I-Original 'Mnu 59 'yeGalofu
Yenza i-Microsoft Access 2013 Database usebenzisa iSifanekiso
Amangcwaba aseMaha yamaKhosi kunye nokuLawulwa kweNgcaciso kwi-Intanethi
IMfazwe yaseFranco-Prussia: Intsimi kaMarshal Helmuth von Moltke uMdala
Yintoni Eyayithethayo kwiComputer Programming?
Ukudlala njani i C Chord enkulu kwiGititar